Mangataka aminao | Fondation des Choisis de Jésus
3A_38: Anaka, mangataka aminao Aho mba tena iaina feno ny fotoana ankehitriny ary handray ny Fitiavana izay arotsako ao aminao. Ny fahasambaranao dia tsy miankina amin’ny maha ianao anao taloha. Fa amin’ny maha ianao anao ankehitriny ary amin’ny maha ianao anao rahampitso. Arakaraka ny hamelanao ny Fitiavana hamolavola anao ihany no mamaritra ny maha ianao anao amin’ny ho avy. Diso ny eritreritrao izay mihevitra fa ny fahasambarana dia miankina amin’ny fihetsiky ny hafa. Ho sambatra ianao raha manaiky ny Fitiavako hiasa ao aminao ary avy eo, amin’ny manodidina anao ary amin’ny alalanao.